မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 11/01/2009 - 12/01/2009
Posted by mabaydar at 9:31 AM 14 comments :
"ရှိပူရသေး... မရှိကုန်မှအေး" ဆိုတာ မဗေဒါ ပိုက်ဆံကုန်ဖို့ အကြောင်း ဇာတ်တိုက်ဖန်လာရင် စိတ်တိုတိုနဲ့ မြည်တွန်တောက်တီးတတ်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းပါ... ပိုက်ဆံများ ကုန်မယ်ဆိုရင် အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဇာတ်တိုက်ကို ကုန်တာပါ...
ဘာလီထဲက ပြုတ်ကျသွားလို့ Touch screen အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ ကျမရဲ့ ဗွီဒီယိုကင်မရာကို အပျင်းကြီးတာရော... အလုပ်ရှုပ်နေတာရောကြောင့် ပြင်ဆိုင် မပို့ဖြစ် မပို့ဖြစ်နဲ့ ဖြစ်နေတာ... ခု နောက်လထဲ ခရီးသွားစရာတစ်ခုရှိလာလို့ ဗွီဒီယိုကင်မရာလေး သွားပြင်မယ်ဆိုတော့ Service Center က ကိုယ်သွားတဲ့နေ့ကျမှ နေရာပြောင်းသွားတယ်... သူငယ်ချင်းတွေကပြောတော့လဲ အဲဒါပြင်တာက အသစ်ဝယ်တဲ့ ဈေးရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ကျမှာတဲ့... အဲဒါတော့ သိပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ကျန်တာအကောင်းပဲရှိသေးတော့ ကိုယ့်ကင်မရာလေး မပြစ်ရက်ဘူးလေ... ဒါပေမဲ့ အဲဒါပြင်ရင် ၁လက နေ ၃လလောက် ထိကြာမယ်ဆိုတော့ ခရီးသွားမဲ့ အချိန်ကို မမှီဘူး... မဗေဒါတို့ကလဲ ခရီးသွားလို့ ဗွီဒီယိုကင်မရာ မပါရင် ပျော်ကို မပျော်တာ... ဘာလီမှာလဲ ကင်မရာ ပျက်သွားပြီးထဲက စိတ်ထဲမှာ အောင့်သက်သက်နဲ့ လွှတ်မပျော်နိုင်ခဲ့ဘူး... ဒီလိုနဲ့ပဲ ကင်မရာ ခပ်သေးသေး အသစ်တစ်လုံး ထပ်ဝယ်လိုက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်... အဟောင်းကိုလဲ ပြင်မယ်ပေါ့...
IT show လေးရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးနေတုံး ကံကောင်းချင်တော့ လာမဲ့ စနေနေ့ ရှိတယ်တဲ့ဗျား... ဒီလိုနဲ့ ၀ယ်တော့မယ်ပေါ့... ခုတစ်လောလဲ ရန်ကုန် ပိုက်ဆံလွှဲမယ်ကြံလိုက်ရင် ဒေါ်လာဈေးတွေက အဝေစိကျနေတော့ အတော်ညစ်တယ်... မြန်မာပြည်က မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းဖြစ်ဖြစ်... Disable ကျောင်းဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကို လှူမလို့ဟာ... ငွေဈေးကျတော့ များများမရဘူး... ကိုယ့်စေတနာမှန်ရင် ငွေဈေးပြန်တက်ပါစေလို့တော့ ဆုတောင်းတာပဲ... (ခုတော့ နဲနဲပြန်တက်လာပြီ)...
ဒီလိုနဲ့ ပိုက်ဆံများကုန်ချင်တော့... ပျက်ဖို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ အချိန်တော့ မပျက်ပဲနဲ့... ခု ပိုက်ပိုက်လိုနေတဲ့ အချိန်ကျမှပဲ... ဟိုနေ့က ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုံး ရုတ်တရက်ကြီး ကျမ ကွန်ပြူတာကြီးပိတ်သွားရော... ပြီးလဲပြီးရော ၀ါယာညှော်နံ့တွေထွက်လာပြီး နေ့ချင်းညချင်း ကွန်ပြူတာကလဲပျက်... ဒီတော့ အဲဒါကလဲ ထပ်ဝယ်ရအုံးမယ်... ကွန်ပြူတာသာ သုံးတာ ကွန်ပြူတာအကြောင်းလဲ ကိုယ်က ဒီလောက်သိတာမဟုတ်... ပြင်ရင်တော့ ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်... IT show ရှိတယ်ဆိုတော့ အသစ်ဝယ်ဖြစ်မလားတော့ မသိဘူး... Laptop ၀ယ်ရင် ကောင်းမလား... Desktop ၀ယ်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားမရဖြစ်နေတယ်... မရှိကုန်မှအေးပဲ... ၀ယ်ပြစ်မယ်... ညစ်တယ်... လိုချင်တာကတော့ Mac Book... ဒါပေမဲ့ Mac Book နဲ့ ပတ်သတ်တာလဲ ဘာမှမသိဘူး... သုံးလဲ မသုံးတတ်ဘူး... ဘာလို့လိုချင်လဲဆိုတော့ Mac Book က ဗွီဒီယိုအက်ဒစ်တင်းတို့ Graphic တို့ ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတာပဲ... Laptop ၀ယ်လိုက်ရင် အိမ်က ရှိတဲ့ LCD monitor က အလကား အပိုဖြစ်သွားမှာလဲ စိုးတယ်... ဂီးးးးးးး.... ဘာလုပ်ရမှန်းသိတော့ဘူး...
ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့.... IT show အကြောင်း စကားစပ်မိတော့ အားလုံးကို Info လေး ဝေမျှလိုက်ပါအုံးမယ်... လာဝယ်ကြနော်... မဗေဒါတော့ အဲကို သွားဖြစ်မှာ သေချာတယ်...
26 November 2009 - 29 November 2009
Venue : Expo Hall5,6 & Foyer2Level 1
ရောင်းချမဲ့ လူတွေအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက....
MP3/4/5, Digital Music Technology, Digital Art Technology, Automobile Electronics, Sports Electronics, IT/New Media Education, Smart Home, Animation, Camera and Camcorder, Computer and Hardware, Gaming, Home Entertainment, Mobile Communications.
Posted by mabaydar at 2:59 AM7comments :
ဒီနေ့ အပြင်သွားရင်း VCD ဆိုင်တစ်ခုမှာ ဆူနာမီအကြောင်းရိုက်ထားတဲ့ ကိုရီးယားကားပြနေတာ လူတွေအုံနေတာပဲ... ကျမလဲ ၀င်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်... ကြည့်လိုက်တော့မှ ရုံတင်တုန်းက ကြည့်မယ်စိတ်ကူးပြီး မကြည့်ဖြစ်လိုက်တာ နာသွားတယ်... မင်းသားတွေထဲမှာ ကျမ အကြိုက်ထဲက တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ Lee Min Ki ပါနေလေရဲ့... မင်းသမီးထဲမှာတော့ Ha Ji Won ပါတယ်... သူ့ကိုလဲ ကြိုက်တယ်... သူလဲ နာမည်ရ မင်းသမီးတစ်ယောက်ပဲ... နောက်မင်းသမီးက Uhm Jung-hwa (Get Karl, Oh song Joo) ထဲက မင်းသမီးလေ... သူ့ကိုလဲ ကြိုက်တယ်... မင်းသားထဲမှာတော့ လီမင်ကီးပဲ ချောချောမောမောပါတယ်... ကျန်တဲ့မင်းသားတွေက ရုပ်ဆိုးတယ်... ဒါနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အဲဒိကားကို ရှာရင် Youtube မှာ အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုးနဲ့ သွားတွေ့တယ်... ဒီလိုနဲ့ ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်...
ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းက အစပိုင်းမှာ နဲနဲနှေးတယ်... အိပ်တောင် အိပ်ငိုက်သွားသေးတယ်... နောက် ဆူနာမီလာတော့ တချို့ effect တွေက အရမ်းသိသာလွန်းတယ်... အနောက်တိုင်း Action ကားတွေလောက်တော့ မပီပြင်ဘူး... ဒါပေမဲ့ Over All ကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Entertaining တော့ဖြစ်ပါတယ်... ဘာပဲပြောပြော Asian ထဲက အဲလိုကားမျိုး ရိုက်လာတာ ဂျပန်နဲ့ ကိုရီးယားပဲရှိသေးတယ်လေ... နောက်ထပ် တိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်... Youtube က Video ကို ဒီမှာ တင်လိုက်ပါတယ်...
Spoiler... Pls select below words to read
တောက်... လီမင်ကီးသေသွားတာတော့ လုံးဝမကျေနပ်ဘူး...
Posted by mabaydar at 2:54 AM 8 comments :
Labels: Video , ဝေဖန်ရေး
Shining Inheritance က မင်းသား Lee Seung-gi ကို ကြိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်များအတွက် စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတစ်ခုပြောစရာရှိပါတယ်...
အဆိုတော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Lee Seung-gi ဟာ Swine flu (၀က်တုတ်ကွေး) ကြောင့် သူ့ရဲ့ Activities တွေ အကုန်လုံးကို ဖျက်သိမ်းပြစ်လိုက်ရတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်...
နိုဝင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့ သတင်းဋ္ဌာနများအရ မင်းသား Lee Seung-gi ဟာ 1 night 2days ဆိုတဲ့ Variety Show ကို ရိုက်အပြီး နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာ ခေါင်းကိုက် ချောင်းဆိုးကာ အဖျားကြီးစွာတတ်ခဲ့ပါတယ်... သူ့ကို Seoul Hospital ရဲ့ အရေးပေါ်ကို တင်အပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၀ရက်နေ့မှာ Swine flu Positive ဆိုတဲ့ အဖြေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်...
သူပါဝင်နေတဲ့ အစီအစဉ်က ပရိုဂျူဆာတွေအားလုံးကို မင်းသားရဲ့သတင်းကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်... 1 Night2Days ထုတ်လုပ်ရေးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက "ဒီ အစဉ်အစီဟာ ၂ပတ်မှ ၁ခါရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နောက် ၂ပတ်ကျရင် မင်းသား ပြန်လည်နေကောင်းနိုင်မနိုင်ဆိုတာကို သေချာမသိရသေးပါဘူး" လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်...
Lee ဟာ လတ်တလောမှာ SBS ရဲ့ Variety Program ဖြစ်တဲ့ Strong Heart ဆိုတာမှာ Co-Host အဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်... ထိုရှိုး တာဝန်ခံ ဒါရိုက်တာက ဒီအပတ်အတွင်းမှာ ရိုက်ကွင်းမရှိသေးတာကြောင့် ပြဿနာကြီးကြီးမားမား မရှိလောက် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်...
သို့သော် Lee ရဲ့ November 14 ရက်နေ့ LA, Hollywood Bowl မှာ Sohn Dam-bi နဲ့ အတူပြုလုပ်မဲ့ စတိတ်ရှိုးကို ဖျက်ပစ်လိုက်ရကြောင်း သိရှိရပါတယ်... ထို ရှိုးအတွက် Lee ဟာ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့မှာ LA ကို သွားရန် စီစဉ်ထားပြီးမှ ဖျက်သိမ်းလိုက်ရကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာသိရှိရပါတယ်... သူ့ရဲ့ Management ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လတ်တလော အခြေအနေမှာ သူ့ကို လူအများနဲ့ ပတ်သတ်တွေ့ကြုံရမဲ့ နေရာတွေကနေ ဝေးဝေးထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သဖြင့် ဘယ်ခရီးစဉ်မှကို သွားမည်မဟုတ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်...
News Source and Photo From : http://www.dramabeans.com/
စာကြွင်း : Shining Inheritance က မင်းသားလေးကို ကြိုက်တယ်လို့ ပြောသွားတဲ့ :) သူ့အတွက် သတင်းကို တွေ့လို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ... စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ...
Posted by mabaydar at 4:06 AM 11 comments :
Posted by mabaydar at 6:58 AM7comments :
တိုးတိုးအာလူးကြော် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိမှုနှင့် သက်ဆိုင်သူများရှင့်/
အကြောင်းအရာ။ ။ တိုးတိုးအာလူးကြော် အရည်အသွေးနှင့် အရည်အတွက်များ ကျဆင်းမှုကို ပြုပြင်စေလို...
ကျမဟာ တိုးတိုးအားလူးကြော်ကို တစ်ထုတ်လျှင် မြန်မာငွေ ၇ ကျပ်ပေးရတဲ့ အချိန်ထဲက... တစ်ရက်လျှင် မုန့်ဖိုး ၅ ကျပ်သာ ရခဲ့သော်လည်း... ၁ရက်ကို တခြားဘာမုန့်မှ မစားပဲ ၂ရက်စာမုန့်ဖိုးနဲ့ စုပြီး အားပေးခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦးပါ... ထိုအချိန်က တိုးတိုးအားလူးကြော်ဟာဆိုရင် ပလတ်စတစ် အကြည်ထုတ်လေးထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေအောင်ထည့်ထားပြီး တစ်ထုတ်စားလိုက်လျှင်ပဲ ကျမအတွက် လိုချင်တဲ့ အရသာထိမိပြီး အာသာပြေလှပါတဲ့အတွက် ၂ရက်မှ ၁ခါ စားရကျိုးနပ်ပါပေတယ်... အိမ်မှ ထမင်းဟင်းမကောင်းဘူးဆိုရင်လဲ တစ်ခြားဟင်းဆိုရင်သာ ဂျီးများခဲ့ပင်မဲ့ မေမေက လမ်းထိပ်က ကုလားပဲဟင်းနဲ့ တိုးတိုးအာလူးကြော်ဝယ်ပေးလိုက်ရင် ကျမအတွက် ထမင်းမိန်စေခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ...
မုန့်ဆိုင်ရောက်ရင် တခြားဟာဝယ်ဖို့တွေဝေပင်မဲ့ တိုးတိုးအာလူးကြော်မပါတဲ့ အခေါက်တော့ မရှိပါဘူး... ဒီလိုအားပေးလာခဲ့တာ တိုးတိုးအာလူးကြော်ဟာ ၇ကျပ်ကနေ ၁၀ကျပ်... ၁၀ ကျပ်က နေ ၁၅ကျပ်... ၁၅ ကျပ်ကနေ ၂၅ကျပ်... (ယခု မြန်မာပြည်တွင် တိုးတိုးအာလူးကြော် တစ်ထုတ် ဘယ်လောက်လဲမသိတော့ပါ... နောက်ဆုံး ရန်ကုန်ပြန်တုန်းကတော့ ၁၀၀ လား ၁၅၀လားရှိပါတယ်) ကျမအသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ တိုးလာတဲ့ ကျမရဲ့ မုန့်ဖိုးတွေကလဲ တိုးတိုးအာလူးကြော်ရဲ့ တိုးလာတဲ့ ဈေးနှုန်းကြောင့် ကုန်နေခဲ့တာ အမှန်ပါ... သို့သော် ကျမတစ်စက်လေးမှ မညဉ်းမငြူ ဖြတ်တောက်မပြစ်ပဲ စားသုံးခဲ့ပါတယ်...
ယခင်က တိုးတိုးအာလူးကြော်ဟာဆိုလျှင် လတ်ဆတ်ပြီးအနာအဆာကင်းတဲ့ အာလူး ကြွတ်ရွရွရယ်... တစ်ထုတ်မှာ ၁ခုပဲ အမြဲပါတတ်တဲ့ ကြက်သွန်ကြော်မွှေးမွှေးလေးရယ်... ၁ထုတ်ဆိုလျှင်ဆိုသလို အာသာပြေလောက်တဲ့ အရည်အတွက်ပါရှိတဲ့အတွက် ဒီအာလူးကြော်ကို ထုတ်လုပ်တဲ့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စေတနာကို စားသုံးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အာလူးကြော် အဖတ်တိုင်း.. ငရုတ်သီးအဖတ်တိုင်း... ကြက်သွန်ကြော်မွှေးလေး တစ်ဥတိုင်းမှာ ခံစားလို့ရပါတယ်...
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများဟာ တစ်ခြားအရာထုတ်လုပ်သူတွေထက် တစ်ချက်သာတာက စားသုံးသူအပေါ်ထားရှိတဲ့ စေတနာပါ... စေတနာအပြည့်နဲ့ချက်တဲ့ မိခင်လက်ရာကို ဘယ်ကမ္ဘာကြော်စားဖိုမှူးမှ အံမတုနိုင်တာဟာ အစားအသောက်ချက်တဲ့သူရဲ့ စေတနာဟာ စားသုံးသူအပေါ် ဘယ်လောက်သက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ အကောင်းဆုံးဥပမာပါပဲ...
သို့သော် ယခုအခါမှာ တိုးတိုးအာလူးကြော်ဟာ ယခင်နဲ့မတူပဲ အရည်အသွေးရော အရေအတွက်ပါ လျော့ကျလာတာတွေ့ရပါတယ်... အရေအတွက်ဆိုရာမှာ ထုတ်လုပ်မှု အရေအတွက်မဟုတ်ပဲ အထုတ်တစ်ထုတ်မှာ ပါဝင်မှုအရည်အတွက်ကို ဆိုလိုပါတယ်... အာလူးကြော်တစ်ထုတ် ၂၅ကျပ်ဖြစ်တဲ့အချိန် (ကျမစိတ်ထင် ၂၀၀၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်း) မှာ အားလူကြော်ထုတ်ပိုးမှုကို နိုင်ငံခြားအဆင့်မှီအောင် ယခုကဲ့သို့စတင်ထုတ်ပိုးခဲ့တာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ်... ကိုယ်စားနေကျ အာလူးကြော်တံဆိပ်လေး အဆင့်မှီထုတ်ပိုးလာတဲ့အတွက် ကျမ ထိုအချိန်က ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... ထို့အတွက်ကြောင့် ၂၅ကျပ်ဖြစ်သွားတာကိုလဲ မညဉ်းငြူခဲ့ပါဘူး... သို့သော် ထို ထုတ်ပိုးမှုပုံစံကို ပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အတွင်းပိုင်းကို မမြင်ရတာတစ်ကြောင်း လေထိုးပြီး အထုတ်ကြီးဖောင်းနေတဲ့အတွက် တစ်ကြောင်း အတွင်းပိုင်းမှ အာလူးကြော် ပါဝင်မှု အရည်အတွက်ကို ခိုသထက်ခိုလာပါတယ်... ဒီလိုဖြစ်လာတာကို ကျမလို အစဉ်အမြဲ စားသုံးသူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ချက်ချင်း သတိထားမိသော်ညား ဆက်လက် သည်းခံကာ စားသုံးခဲ့ပါသေးတယ်...
သို့သော် ယခုအခါမှာတော့ တိုးတိုးအာလူးကြော်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ စေတနာကို လုံးဝ လုံးဝ ခံစားလို့မရတော့တဲ့အပြင်... စားသုံးသူတွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စော်ကားလာတယ်ဆိုတာ သတိပြုမိလာပါတယ်... စကာင်္ပူကို ရောက်တော့ ယခင် မြန်မာပလာဇာမှာ မရောင်းခင်တုန်းက အိမ်ကို အမြဲ လူကြုံနဲ့ ထည့်ခ်ိုင်းပြီးစားပါတယ်... ယခု ပင်နီဇူလာပလာဇာမှာ ၁ထုတ်ကို စကာင်္ပူ ပြား ၅၀ (မြန်မာငွေ ၃၆၅ကျပ် တန်ဖိုးရှိ) နဲ့ ၀ယ်စားပါတယ်... လေယာဉ်ပျံတွေ သဘောင်္တွေစီးလာတဲ့ အာလူးကြော်မို့ ပြား ၅၀ဆိုတာကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်... (ဟိုတစ်လောက ဆိုင်၁ဆိုင်မှာ ၁ကျပ်နဲ့ ရောင်းလို့ ၀ယ်မစားခဲ့ပါဘူး...)
ယခုတိုးတိုးအာလူးကြော်ရဲ့ အရည်အသွေးဟာ မကောင်း မလတ်ဆတ် အနာအဆာပါသော အာလူးများကို အသုံးပြု၍လားမသိ အာလူးတွေဟာ ပဲ့ရွဲ့နေတာပါပဲ... ဒါကလဲ အာလူးအကြေကြော်မို့ လက်ခံလို့ရတယ်ထားအုံး... မဲတူးပြီး အာလူးကြော်အတူးတွေ ဖြစ်လာတာကတော့ သည်းခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာကို လွန်လာပါတယ်... ယခင်က ကျမအကြိုက်ဆုံး ၁ထုတ်လုံးမှာ ၁ဥပဲပါတတ်တဲ့ ကြက်သွန်ကြော်လေးဟာလဲ ဘယ်ဘ၀ ဘယ်ဋ္ဌာနီကိုပြောင်းပြီး တိုးတိုးအာလူးကြော်မှာ အရင်က ကြက်သွန်ကြော်ပါပါတယ်ဆိုတာ ကျိမ်ပြောရင်တောင် ယုံကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး...
အဆိုးဆုံးကတော့ အထုတ်တစ်ထုတ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ပမာဏက ယခင်ရဲ့ ၃ပုံ ၁ပုံနီးပါးလောက်လေးသာရှိတော့တာပါ... ယခင်က ၁ထုတ်စားလိုက်ရင် တင်းတိမ်သွားပင်မဲ့... ခုမှတော့ အာလူးကြော် ၁ထုတ်စားပြီးတာတောင် ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိလို့ အထုတ်များပေါက်နေသလားလို့ ပြန်ကြည့်ရတဲ့ အဖြစ်ကိုရောက်နေပါတယ်... အထုတ်ကြီး ကြီးနေလို့ စားသုံးသူက သတိမပြုနိုင်လောက်ဖူးမထင်ပါနဲ့... စားသုံးသူတွေက ငတုံးမဟုတ်ပါဘူး...
ထို့အတွက် အကြံပေးလိုတာက ယခင်လိုသာ စေတနာရှေ့ထားပြီးထုတ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စေတနာ အကျိုးပေးပြီး ဒိထက်အောင်မြင် ချမ်းသာမှာပါ... သို့သော် ယခုအတိုင်းဆက်လက်ထုတ်လုပ်နေမည် ဆိုပါက ကျမကဲ့သို့ အစဉ်အမြဲအားပေးနေသော ပရိတ်သတ်များကို မျက်လုံးထဲမထား စော်ကားသည်ဟု ခံစားရသဖြင့်... တိုးတိုးအာလူးကြော် သုံးစွဲမှုကို ဖြတ်တောက်သင့် ဖြတ်တောက်ပါမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်...
လူ ၁ ယောက်မစားလို့ သင်တို့ စီးပွားရေ မထိခိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး မထိမဲ့ပြုံး မပြုံးပါနဲ့... ကျမပြောခဲ့ သလို စားသောက်ကုန်ဟာ စေတနာပေါ်အဓိက အရင်းတည်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက် စေတနာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်... ကျမ မစားတော့ဘူးဟု ဆုံးဖြတ်သော်ငြား သင်တို့ စီးပွားရေးကို ထောက်ငံ့သောအားဖြင့် ကျမသူငယ်ချင်းများထဲတွင် စားသုံးသူရှိပါက တားမြစ်မည်တော့ မဟုတ်ကြောင်းကို စိတ်အေးစေလိုပါတယ်... သို့သော် ထိုစားသုံးသူများလည်း သင်တို့၏ စေတနာမပါရှိပဲ အမြတ်သက်သက်သာ ထုတ်လုပ်နေသော ဟန်သာရှိပြီး အဆန်မရှိတဲ့ တိုးတိုးအာလူးကြော်ကို ကျမပြောစရာမလိုပဲ သူ့တို့ဘာသာလျှင် ဆက်လက်သုံးစွဲတော့မည် မဟုတ်ကြောင်းကို သေချာတပ်အပ် သိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်... အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျမပတ်ဝန်းကျင်တွင် တိုးတိုးအာလူးကြော် အရည်အသွေးကျမှုကို ကျမလောက် သည်းခံပြီး စားသုံးနေသူ တစ်ဦးမှ မရှိတော့ပါ... ကျမသာလျှင် ငယ်ငယ်ထဲက စားခဲ့သော... ကျမအတွက် အာလူးကြော်သက်သက်တင်မဟုတ်ပဲ အမှတ်တရ အဖြစ်အပျက်လေးတွေပါ ရှိခဲ့ဖူးသော တိုးတိုးအာလူးကြော်ကို ယခုထိစားသုံးခဲ့တာပါ...
ယခုလို စားသုံးမှုကို ဖြတ်တောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာ အနှစ်နှစ်အလလ ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူက အရောင်ပြောင်းသွားလို့ မသင့်တော်တော့ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတဲ့ နာနာကျင်ကျင် ဆုံးဖြတ်မှုဖြစ်ပါတယ်... အကယ်၍ တိုးတိုးအာလူးကြော် အရည်အသွေးနဲ့ အရည်အတွက်ကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျမဘက်ကလဲ မှားခဲ့တာတွေကို ခွင့်လွှတ်ကာ ဒုတိယအကြိမ် အခွင့်အရေးပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်... တိုးတိုးအာလူးကြော် အရည်အတွက် တိုးမတိုးကို ပင်နီဇူလာပလာဇာရောက်တိုင်း ဆိုင်ပေါ်က အထုတ်တွေကို လက်နဲ့ ချိန်ဆကြည့်ပြီး စောင့်ကြည့်နေမည်ဖြစ်ပါတယ်...
တိုးတိုးအာလူးကြော်ကို စားသုံးခဲ့ဖူးသူ တစ်ဖြစ်လဲ မဗေဒါ
(PS... ဒီနေ့ တိုးတိုးအာလူးကြော်ဝယ်စားရင်း မခံရပ်နိုင်လွန်း၍ ဒီပေါ်မှာ ပေါက်ကွဲလိုက်ပါတယ် (နောက်ဝယ်မစားတော့ပါ)... အကယ်၍များ ဒီပိုစ့်ကို မတော်တဆ တမင်တကာ တိုးတိုးအာလူးကြော်ပိုင်ရှင် မြင်၍ အရည်အသွေး အရေအတွက်ကို ပြုပြင်မည်ဆိုလျှင် အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာမိမည်ဖြစ်ကြောင်း)
Posted by mabaydar at 3:38 AM 11 comments :
Labels: Humour , မုန်တိုင်း , ဝေဖန်ရေး